About Phyathai3Hospital | Intellect Health
About Ramkhamhaeng Hospital
About Phyathai3Hospital
+66842430137, +951-661392 , 0942109249
100/153, Soi Phonyothin 65/1 Phonyothin Road, Bangkhen, Bangkok 10220.
No-44C, Melika Street, Mayangone Township, Yangon, Myanmar.
"သင်နှင့်သင်၏ မိသားစုအတွက် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ဖုန်းတစ်ကြိမ်ဆက်သွယ်ရုံဖြင့် လိုအပ်သည်များကို စိတ်ချယုံကြည် မြန်ဆန်စွာ အခမဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။"
Phyathai3ဆေးရုံကြီးအကြောင်း
ပြည်သူလူထုများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရန် အလိုငှာ Phyathai3ဆေးရုံကြီးကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ Phyathai3ဆေးရုံကြီးသည် ဘန်ကောက်မြို့တွင် တည်ရှိပြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံထားရသော ဆေးရုံကြီးဖြစ်ပါသည်။ Phyathai3ဆေးရုံကြီးသည်အတွင်း လူနာပေါင်း ၅၀ဝခန့်ကို လက်ခံပေးနိုင်ပြီး ပြင်ပလူနာပေါင်း တစ်နေ့လျှင် ၂၀ဝ၀ကျော်ကို ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးနေလျက်ရှိပါသည်။
Phyathai3ဆေးရုံကြီးသည်တိုင်းအဆင့်မှီဆေးရုံကြီးဖြစ်ပြီး ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်စည်းစနစ်ကျသော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့်တကွ နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးပညာကိရိယာများဖြင့် ကုသပေးနေသော ဆေးရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆေးရုံကြီးရှိ အမျိုးမျိုးသော အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများမှ တာဝန်ယူ၍ လူနာများကို တစ်နေရာထဲတွင် ရောဂါများပျောက်ကင်းစေရန် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် နိုင်ငံတကာမှလာရောက်သော လူနာများအား လိုအပ်ချက်များဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်ရန်အတွက် International Service Centre မှလည်း တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ လူနာများအတွက် အစစအရာရာ ချောမွေ့ပြီး ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေရန် ရည်မှန်းရ်ျ ကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သော ဘာသာပြန် ဝန်ထမ်းများကို ဆေးရုံအတွင်းတွင် ပံ့ပိုးပေးနေလျက်ရှိပါသည်။
Phyathai3ဆေးရုံကြီးကို ရွေးချယ်သင့်သည့်အကြောင်းရင်းများ
အရေအသွေးပြည့်မှီသော ဆရာဝန်များနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ
ပြီးပြည့်စုံသော ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်စက်ကရိယာ များပံပိုးနိုင်ခြင်း
အတွင်းလူနာ ၅၀ဝကျော် လက်ခံနိုင်ခြင်း
နေ့စဉ် ပြင်ပလူနာ ၂၀ဝ၀ကျော် ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း
ဆေးရုံဝန်ထမ်းများ၏ မိသားစုနှင့်မခြား နွေးထွေးပျုငှာ ဆက်ဆံခြင်း
Samitivej Hospital is an award-winning facility in Bangkok, Thailand providing international-standard healthcare with JCI accreditation. Built in 1979, the hospital’s commitment to quality care and innovation has kept Samitivej Sukhumvit at the forefront of medical technology.
Copyright © 2017 Intellect Health Resource Co.,Ltd - Powered by Web Design Company